Italia sy Etazonia: Taratasy roa hafa amin'ny UNESCO World Heritage List
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Italia sy Etazonia: Taratasy roa hafa amin'ny UNESCO World Heritage List
Trano roa hafa no voasoratra ao amin'ny UNESCO's World Heritage List, mamarana ireo voasoratra amin'ity lisitra ity tamin'ity taona ity.
Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (Italia) - Any avaratra-atsinanan'i Italia, ity tranonkala ity dia misy ampahany amin'ny tanimboly maniry ny faritry ny famokarana divay Prosecco. Ny havoana 'hogback' dia miavaka, ciglioni - poti-boaloboka kely amin'ny tokotany ahitra - ala, tanàna kely ary tanimboly. Nandritra ny taonjato maro, ity tany mikitoantoana ity dia novolavolain'ny olona ary namboarin'izy ireo. Hatramin'ny 17th taonjato, ny fampiasana ny ciglioni dia namorona tontolon'ny chequerboard manokana misy andalana voaloboka mifanitsy sy mitsangana mankany amin'ny tehezan-tendrombohitra. Ao amin'ny 19th taonjato, ny bellussera ny teknika fampiofanana ny voaloboka dia nanampy tamin'ny endrika mampiavaka ny tontolo.
The 20th taonjato Architecture of Frank Lloyd Wright (Etazonia amerikana) - Ny trano dia misy trano valo any Etazonia noforonin'ny mpanao maritrano mandritra ny tapany voalohan'ny taonjato faha-20. Anisan'izany ny Fallingwater (Mill Run, Pennsylvania), ny Herbert sy ny Katherine Jacobs House (Madison, Wisconsin) ary ny Guggenheim Museum (New York). Ireo tranobe ireo dia taratry ny "maritrano biolojika" novolavolain'i Wright, izay misy drafitra misokatra, fanjavozavoana ny fetra eo amin'ny ivelany sy ny atitany ary ny fampiasana fitaovana mbola tsy nisy toy izany toy ny vy sy ny beton. Ny tsirairay amin'ireo trano ireo dia manolotra vahaolana vaovao momba ny filan'ny trano, fanompoana, asa na fialamboly. Ny sanganasan'i Wright tamin'io vanim-potoana io dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fampandrosoana ny maritrano maoderina any Eropa.
Ny Adnate hisokatra ao Perth: Miomàna ho an'ny Mural avo indrindra eran'izao tontolo izao